Okugqwesileyo kwezesondo zokuphucula iiHormones umgubo wefektri yoMvelisi
/iimveliso/Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones
I-AASraw inikezela ngeentlobo zesondo zokuphucula i-hormone powder kunye nokubonelela okuzinzile, sinokuthumela i-powder yeziyobisi zesondo kwihlabathi lonke, ngakumbi e-USA, eYurophu, inkonzo ye-imeyile isebenza kakuhle kwaye luhlobo lokuhanjiswa kwekhaya, lukhuselekile kakhulu. Ukongeza, umyalelo omkhulu unokuxhaswa ngexabiso elikhuphisanayo.
Thenga iPowder yokuphucula iiHormones ngesondo
Yohimbine HCL Powder (146-48-5)-COA
I-Tadalafil Powder (171596-29-5)-COA
2. Ngaba amanye amayeza angayichaphazela iCIALIS?
Amanqanaba amabhinqa e-estrogen, iprogesterone, kunye ne-testosterone ngokwendalo ziyehla kunye nobudala, ngakumbi ngexesha nasemva kokuyeka ukuya exesheni. Fumanisa iindlela zokugcina isini sakho siqhuba phezulu, nkqu amanqanaba ehomoni aphantsi. Kwaye, kwamanye amadoda, kunye nobudala buvela, ukuqhuba ngesondo kuyehla. Kwaye, ngakumbi, amanye amadoda anengxaki yokungasebenzi kakuhle. Sebenzisa amayeza aphucula isondo ngokuchanekileyo, bancede babonwabele ubomi, okanye ubomi obungcono besini.
Ukuba nengxaki yokulungiswa amaxesha ngamaxesha akusosizathu senkxalabo. Ukuba ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile ngumcimbi oqhubekayo, nangona kunjalo, kunokubangela uxinzelelo, kuchaphazele ukuzithemba kwakho kunye negalelo kwiingxaki zobudlelwane. Iingxaki zokufumana okanye ukugcina ulwakhiwo zinokuba luphawu lwemeko yezempilo efuna unyango kunye nomngcipheko wesifo sentliziyo.
amayeza abizwa ngokuba yi "nitrate" ahlala emiselwe iintlungu esifubeni